खोला सुकेपछि २० जलविद्युत आयोजना बन्द हुने अवस्थामा, ऋण तिर्नै नपुग्ने गरि विद्युत उत्पादन
प्रकाशित मिति: Sep 3, 2019 11:17 AM | १७ भदौ २०७६
काठमाडौं। गत साता निजी क्षेत्रका २० जलविद्युत प्रवर्द्धकले आफ्ना जलविद्युत आयोजना लिलाम गरिदिन भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाए।
उनीहरुले बुझाएको आयोजनाको सूचीमा एक मेगावाट भन्दा साना आयोजनादेखि १० मेगावाट सम्मकाजलविद्युत आयोजना छन्।
निजी क्षेत्रबाट अहिले सम्म ८१ वटा जलविद्युत आयोजना निर्माण भई ५६० मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ। तर अति समस्याग्रस्त आयोजनाको सूचीमा भने २० वटा जलविद्युत आयोजना देखा परेका छन्।
८१ जलविद्युत आयोजना मध्ये ११ वटा जलविद्युत आयोजना भने १० मेगावाट भन्दा ठूला छन्। जसको कुल क्षमता ३०० मेगावाट हुन्छ। बाँकी ७० वटा साना आयोजनाबाट २६० मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन हुन्छ। ती मध्ये पनि २० वटा अति समस्याग्रस्त आयोजनाको उत्पादन क्षमता ७० मेगावाट मात्रै छ। बाँकी ५० वटा आयोजनाको १९० मेगावाट विद्युतमा भने तुलनात्मक रुपमा कम समस्या छ।
रुग्ण आयोजना संघर्ष समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद अधिकारी भने ७० मध्ये ६६ वटा आयोजनामा समस्या रहेको बताउँछन्। 'केही दिन अघि हाम्रो सम्पर्कमा आएका आयोजना मात्रै मन्त्रालयमा पठायौ।' अधिकारीले बिजमाण्डूसँग भने,'अहिले थप ५ वटा आयोजना थपिएका छन्। ७० मध्ये ६६ वटा आयोजनामै हाइड्रोलोजी(पानीको सतह घटबढ)को समस्या देखिएको छ। विस्तारै अरु आयोजना पनि यो आन्दोलनमा आउँछन्।'
खोलामा पानी सुकेपछि उत्पादन घट्यो
कुनै पनि आयोजना निर्माण गर्नुअघि प्रवर्द्धकले खोलामा बग्ने पानीको मात्रामा धेरै लामो अध्ययन गर्छन्। २५ देखि ३० वर्ष सम्म न्यूनतम उत्पादन हुने विद्युतको प्रक्षेपण आए मात्रै आयोजना अघि बढ्छ। सुरुवाती केही वर्ष प्रक्षेपण गरेअनुसारकै विद्युत उत्पादन भएपनि अहिले भने खोला सुक्न थालेका छन्।
प्रक्षेपण गरिएको विद्युत उत्पादन गर्न नसकेका कारण अहिले २० वटा आयोजनालाई प्राधिकरणले जरीवाना लगाइरहेको छ। जसका कारण थोरै विद्युत बेचेर आउने पैसा पनि प्राधिकरणलाई जरीवाना तिर्दै ठिक्क हुने गरेको छ।
आयोजनाको सञ्चालन, मर्मत सम्भार र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न पनि कठिन भएको प्रवर्द्धक बताउँछन्। बैंकको ब्याज र कर्मचारीलाई तलव खुवाउन नसक्दा प्रवर्द्धकहरु आत्महत्या गर्ने सम्मको सोचमा पुगेको एक प्रवर्द्धकले बताए।
आयोजना छनौट गलत वा मौसम परिवर्तनको प्रभाव?
साना जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा आयोजनाको छनौट र अध्ययन नै गलत भएकोले ती आयोजना समस्यामा परेको विद्युत प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरुको भनाई छ। प्राधिकरण स्रोतका अनुसार ७० वटा साना जलविद्युत आयोजना मध्ये केही आयोजनाले राम्रै आम्दनी पनि गरिरहेका छन्।
तर आयोजनाका प्रवर्द्धकहरु भने मौसम परिवर्तन र भूकम्पका कारण साना आयोजनामा बढी क्षतिभएको दावी गर्छन्। मौसम परिवर्तनले गर्दा खोलामा बग्ने पानीको सतहनै घटेको छ। थोरै पानी भएपछि बिजुली पनि थोरै उत्पादन हुनेनै भयो।
भूकम्पपछि केही आयोजनाका खोलामा आउने पानीका मुहान सुकेका र बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपका कारणले आयोजना निर्माणमा ढिलाई भई लागत बढेको भैरबकुण्ड हाईड्रोपावरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेश पौड्याल बताउँछन्।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष अधिकारी भने खोलामा पानीनै सुकेपछि अधिकांश आयोजना प्रभावित भएको बताउँछन्।प्राधिकरणलाई पेनाल्टी र बैंक तथा बित्तीय संस्थालाई तिर्नुपर्ने ब्याज बढेपछि आयोजनाले ५५ प्रतिशत मात्रै धानेको छ भने बाँकी ४५ प्रतिशत सावाँ ब्याज प्रवर्द्धकले घरखेत बेचेर तिरिरहेको अधिकारीको दावी छ।
कसरी लाग्छ पेनाल्टी?
आयोजनाको पिपिए गर्दा हरेक महिना कति विद्युत दिन सकिन्छ भनेर सुरुमै प्रक्षेपण गरिएको हुन्छ। सुरुमा प्रक्षेपण गरिएको विद्युत दिन नसकेमा प्राधिकरणले अपुग विद्युत बराबरको आयोजनालाई पेनाल्टी लगाउँछ। यदि असोज महिनामा आयोजनाले १० हजार युनिट विद्युत दिने प्रक्षेपण गरेको छ र उसले १० हजार युनिट दिन नसक्ने भएमा ३० दिन अघिनै प्राधिकरणलाई जानकारी दिनुपर्छ।
उसले ३० दिन अघि दिएको जानकारी अनुसार पनि विद्युत दिन सकेन भने पिपिएमा प्रक्षेपण गरेको वा एक महिना अघि प्रक्षेपण गरेको विद्युत भन्दा कति युनिट कम हुन्छ त्यतीनै युनिटको विक्री मूल्यमा प्राधिकरणले पेनाल्टी लगाउँछ।
उदाहरणका लागि १० हजार युनिट विद्युत बेच्दा आयोजनाले ८४ हजार रुपैयाँ पाउँथ्यो। तर उसले ८ हजार युनिट मात्रै विद्युत दियो भने ६७ हजार २०० रुपैयाँ मात्रै हुन्छ। २ हजार युनिटको जरिवाना १६ हजार ८०० रुपैयाँ तिर्दा आयोजनाले ५० हजार ४०० रुपैयाँ मात्रै पाउँछ। कुनै कुनै महिना प्रक्षेपण गरेको विद्युत भन्दा ५० प्रतिशत सम्म कम विद्युत उत्पादन हुन्छ। त्यस्तो बेलामा आयोजनाले एक रुपैयाँ पनि पाउँदैन।
एलाइन्स पावर नेपाल
थप्पल खोला हाईड्रो पावर
माथिल्लो हाडी खोला
सेन्टर फर पावर डेभ एण्ड सर्भिसेस
सिनर्जी पावर डेभलोपमेन्ट
लाफिङ बुद्ध पावर
नेपाल हाईड्रो डेभलोपर
दरम खोला ए
इलेक्ट्रो कम एण्ड रिसर्च सेन्टर
दरौदी खोला ए
दरौदी खोला हाईड्रोपावर
मोलुङ हाईड्रोपावर कम्पनी
२०६२ देखि २०७५ सम्मकै आयोजनामा समस्या
२० वटा जलविद्युत आयोजनाको सूचीमा २०६२ देखि २०७३ सम्म सञ्चालनमा आएका १७ आयोजना छन्। ०७३ पछि ०७५ सम्म सञ्चालनमा आएका तीन वटा आयोजना पनि उक्त सूचीमा छन्। १० वर्ष सम्म सञ्चालन भइसकेका आयोजनाहरु अहिले आएर समस्यामा परेका हुन्। खोलामा पानी सुक्दै गएपछि विद्युत उत्पादन घटेको र आधा मात्रै विद्युत उत्पादन गर्दा प्राधिकरणलाई उल्टै घरबाट पैसा तिर्नु परिरहेको आयोजना प्रवर्द्धकको गुनासो छ।
केही आयोजना भने पहिलेनै अध्ययन गरिएका र निर्माण गर्दै जाँदा ढिलाई भएपछि उत्पादनको समय सम्म आइपुग्दा आधा मात्रै विद्युत उत्पादन हुने अवस्थामा पुगेका हुन्।
खोलामा पानी खेर फालेर कसैले जरिवाना तिर्छ?
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था ईपानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे खोलामा पानी खेर फालेर प्राधिकरणलाई पेनाल्टी तिर्न कसैले पनि नचाहने बताउँछन्।
'खोलामा पानी सुकेपछि कसको केलाग्छ? पाण्डेले प्रश्न गर्दै भने,'अर्बौ रुपैयाँ लगानी गरेका प्रवर्द्धकलाई भनेभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गरेर छिटो ऋण तिर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। वातावरण परिवर्तनका कारण पानी सुकेर विद्युत उत्पादन नभएको बेला राज्यले थप पेनाल्टी लाउन हुँदैन। यसमा राज्यले सोच्नुपर्छ।'
२० मध्ये १५ आयोजना काठमाडौ वरिपरिका
समस्याग्रस्त सूचीमा रहेका २० वटा आयोजना मध्ये १५ आयोजना काठमाडौ वरिपरिका जिल्लाका छन्। सिन्धुपाल्चोकका मात्रै७ वटा आयोजना रहेका छन् भने ललितपुर, बाग्लुङ, दोलखा,लमजुङ र संखुवासभाका २/२ वटा आयोजना छन्। ओखलढुङ्गा, धादिङ, ताप्लेजुङ र गोरखाका १/१ आयोजना उक्त सूचीमा रहेका छन्।
अहिले रुग्ण भनिएका कतिपय जलविद्युत आयोजना नेपालमा माओवादी जनयुद्ध भइरहेको बेलामा निर्माण भएका आयोजना छन्। त्यतिबेला ६/७ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएर आयोजना बनाएपनि अहिले बैंकको ब्याज १३/१४ प्रतिशत पुगेको छ। सरकारले जलविद्युत आयोजनालाई दिने भनेको कर छुट र एकमुष्ठ अनुदान पनि दिएको छैन।
खोलामा पानी सुकेर उत्पादन घट्यो भनेर पेनाल्टी लगाइरहेको छ। सरकारको ऊर्जा संकट निवारण दशकमा भनिएका कुराहरु पालना गरेर बैंकको ब्याज स्थीर, कर छुट र एकमुष्ठ अनुदान भूक्तानी र पेनाल्टी हटाएर अहिलेको महंगी अनुसार विद्युत खरिद दरमा परिवर्तन गरिदिए मात्र आयोजना बाँच्न सक्ने संघर्ष समितिका अध्यक्ष अधिकारी बताउँछन्।
'अन्यथा ३० वर्ष पछि सरकारले लिने आयोजना अहिलेनै आफै सञ्चालन गरोस्। भएको केही खर्च दिए ठिकै छ नदिएपनि केहि छैन। सरकारले आयोजना सञ्चालनको जिम्मा लिनुपर्छ। सरकार लचकदार भएन भने हामी आन्दोलनका थप कार्यक्रम ल्याउँछौं' अधिकारीले भने।
खोला सुकेपछि २० जलविद्युत आयोजना बन्द हुने अवस्थामा, ऋण तिर्नै नपुग्ने गरि विद्युत उत्पादन को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।